Archives for February 2010 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Posts made in February, 2010	1
အယ်ဒီတာ့ သင်ပုန်း ( အတွဲ၎၊ အမှတ်၃ )
ကမ္ဘာ့လူငယ်တွေထဲက မြန်မာလူငယ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး
Page 1 of 1512345...10...>»
Comments By Post"လိုအပ်ချက်များ" - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ - Thint Aye Yeik - apolo11စာမရေးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ကဗျာ - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ခရီးသွားတိုင်း လည်ပတ်သင့်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံက အထူးခြားဆုံး နေရာ (၅)ခု - ကထူးဆန်းစု စကား - NCA စာချုပ်တစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikမှားတတ်ကြပေမဲ့လို့ - သျှားသက်မာန် - Foolish Girl" စိတ်နှင်ရာ " - Foolish Girl - Thint Aye Yeik" ရှူခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်း " - Foolish Girl - ကိုပေါက်(မန္တလေး)ကိုယ့်အတွက် လက်ဆောင် - Kabyar Phyu Phyu - Thint Aye Yeikပင့်ကူ အမှုဆန်း - အပိုင်း (၂) - မောင်ဘလိူင် - မောင်ဘလိူင်Switzerland နိုင်ငံကိုအလည်မသွားခင် သိထားရမည့်အချက် (၁၀)ချက် - သျှားသက်မာန် - Ma Eiပျားရည်ဆမ်းခရီးအဖြစ် သွားသင့်တဲ့ အာရှရဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့နေရာတွေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikကမ္ဘောဒီးယား (၀ါ) ကဘားဒီးယား - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံးရှုခင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဘားများ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik" မှား " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - Thint Aye Yeik"ပြန်ချိန်" - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ - kai - kaiPhuket Big Buddha (ဘုရားကြီး) - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik"ယုံကြည်ခြင်း၏မှတ်တိုင်များ" - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - Thint Aye YeikAsia ရဲ့အထူးခြားဆုံးဘုရားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ One-Pillar (ကျောက်တိုင်) ဘုရား - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikUS သို့ ပေးစာ - Thint Aye Yeik - ကထူးဆန်းသားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကြပါ - etone - kaiကရင်ပြည်နယ်ကသိပ်လှတယ်လို့… ကိုယ်ပြောရင်…. မင်းယုံလိုက်ပါ……… - သျှားသက်မာန် - Ma Eiကြည့်ခဲ့ဖူးသော.... - Thint Aye Yeik - Thint Aye Yeikစု စကား - NYC 9/18/16 - Thint Aye Yeikသေချာမှုထဲက မရေရာသော အလွမ်း - Foolish Girl - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်ခံစားမိသမျှ (၁) - Foolish Girl - ဦးကြောင်ကြီးဝိဥာဉ်တစ်ကောင်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု - Foolish Girl - Thint Aye Yeikအိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ဘန်ကောက်…. - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်ဘန်ကောက်ခရီးသွားမှတ်တမ်း (ပထမအကြိမ်) - သျှားသက်မာန် - uncle gyiတစ်သက်တာမမေ့နိုင်စရာ ရှုခင်းလှလှတွေဝန်းရံထားတဲ့ အံ့ဖွယ်စားသောက်ဆိုင်(၁၈) ခု - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဘန်ကောက် ရှိ Rutnin မျက်စိ ဆေးရုံ ကြီး ❤ - သျှားသက်မာန် - Foolish Girlခေတ်သစ်လိမ်လည်နည်းများ - Foolish Girl - etoneကဲ....ဘာပြောမလဲ.... - etone - kaiပန်းကလေးများမနွမ်းစေချင် - Foolish Girl - etoneခက်ပြီ - etone - Thint Aye Yeikအပြုံး၏နောက်ကွယ် အမုန်း၏အခြားတစ်ဖက် (အပိုင်း-၂) - Foolish Girl - Thint Aye Yeikသူတို့အမြင် Buddhism - kai - ဦးကြောင်ကြီးအချစ် ခါးခါး - Foolish Girl - ဦးကြောင်ကြီးပင့်ကူ အမှုဆန်း - အပိုင်း(၁) - Thint Aye Yeik - apolo11Category	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91103 Kyats )alinsett (90128 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80761 Kyats )padonmar (76644 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (58984 Kyats )monmon (58293 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB